Ikhabhathi yomyili eLakefront enebhafu eshushu
Indlu yamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguJanine
Le ndawo iphambi kwechibi inonxweme lwabucala kunye nethampu yesikhephe isandula ukudweliswa emva kokulungiswa okubanzi. Injongo ibikukubonelela ngesitayile, intuthuzelo kunye nokulula ngefanitshala yoyilo oluphezulu, ukukhanya, kunye ne-accents. I-Duncan Lake lilitye elifihliweyo ngaphandle nje kwe-Rt. 16 e-Ossipee, NH. Ipropati ibekwe kwisiqingatha se-acre yemithi kunye nemithi yompayina, kumda osemazantsi weeNtaba eziMhlophe.
Ikhabhinethi inomgangatho omkhulu kunye nendawo yegrill eneendawo ezininzi zokuhlala. Hlala emva kwaye uphumle kwi-tub entsha eshushu ejonge echibini-imbono ziyaphefumla kwaye ukuphuma kwelanga kunye nokutshona kwelanga kuyamangalisa. Kukho ukufikelela ngokuthe ngqo kumanzi kunye nolwandle lwayo lwangasese kumgama ambalwa ukusuka kwidesika.
Ikhitshi ehlaziyiweyo inezixhobo ezitsha zombane ezineembiza zokupheka ezibalulekileyo, iipani, izixhobo, izitya kunye nezinto zokunqunqa kwakunye nemenzi yekofu, itoaster, isikhenkcezisi sefriji, umatshini wokuhlamba izitya, imicrowave kunye ne-oveni eqhotsiweyo.
Kukho ukufudumeza kunye ne-air conditioning kunye nabalandeli besilingi kumagumbi okulala kunye negumbi lokuphumla kunye nendawo yomlilo esebenzayo (iinkuni zinikezelwa simahla). Kukho amagumbi okulala amabini aneebhedi zobukhulu bokumkanikazi kunye neofisi enomandlalo ophindwe kathathu yokulala ngokukhululekileyo ziindwendwe ezintandathu.
Nangona ukucwangciswa komhlaba kunye nokutyala kuye kwayiphucula ipropathi, oku kuthintelwe ukugcina indawo yasendle kunye nentlonipho yezikhokelo zolondolozo lwezakhiwo eziphambi kwechibi. Uninzi lwepropathi ishiywe yasendle kunye neentlobo ezininzi zezityalo, kubandakanya neSityalo sasendle sePitcher esibamba kwaye setyise izinambuzane!
Kukwakho nendawo yokucima umlilo kunye nepikiniki, i-tennis yetafile, umngxuma wombona kunye ne-boules.
Imisebenzi yokukhwela isikhephe eDuncan Lake ithintelwe ukukhusela abemi basehlotyeni beentaka zasemanzini zaseLoon ngeempawu zabo kunye neminxeba eyothusayo. Nangona izikhephe ezinamandla zivunyelwe, akufuneki zenze ukuphaphama okanye zidlule i-6mph, zivumela ukonwabela ngoxolo nokukhuselekileyo kwamanzi. Ichibi ligcwele nyaka ngamnye ngeentlobo ezahlukeneyo zeTrout kwaye, ngexesha lasehlotyeni, abadobi bahamba ngamaphenyane kunye ne-kayaks, belinga iintlanzi ukuba zilume. Izilwanyana zasendle zasekhaya ezibonwa kufutshane nendlu ziquka amaKhozi, iiKingfisher, iiHerons, ezinye iindidi zeentaka ezibhabhayo, iichipmunks, oomatse kunye namaxhama.
Kukho ii-kayak ezi-3 ezifumanekayo zokusebenzisa ukuze uzise izixhobo zakho zokuloba. Ukuloba komkhenkce kwenziwa ebusika. Amahlathi aseState akufuphi aneendlela ezilungiselelwe ukukhwela intaba, ukutyibilika ekhephini, ukutyibilika ekhephini, kunye nokuhamba ngekhephu. Uya kufumana i-skiing ezantsi kunye ne-snowboarding kwimizuzu nje eli-15 kude.
Ikhabhinethi idibanisa indawo yasemaphandleni kunye nokufikeleleka ngokulula kunye nokusebenziseka kweevenkile zasekhaya ngaphakathi komgama wokuhamba, kubandakanya iHannafords, iWalgreens, iSibonelelo seTrektara, i-Ocean State Joblot kunye nezinye ezininzi. Ukuhamba nje yimizuzu engama-20, edolophini eWolfeboro kukho iivenkile ezininzi ezinomdla kunye neendawo zokutyela ezintle kunye neendawo zokutyela ezintle.
Ukhetho olubanzi lweevenkile ezinkulu, iindawo zokuthenga ezidumileyo kunye neendawo zokutyela ezikhethekileyo, ii-pubs kunye neentsuku zolonwabo zosapho zifumaneka eNorth Conway, malunga nemizuzu engama-25 emantla e-Ossipee, kwaye kukho izidlo ezininzi, izindlu zepizza kunye neendawo zokutyela ezilungileyo kakhulu ecaleni kwendlela ye-16 ukuya. emantla nakumazantsi ngaphakathi kwe-5 ukuya kwi-15 i-radius yemizuzu ye-cabin. Iingcebiso zokutya kwendawo kunye neminye imisebenzi inikwe kwiNcwadi yeNdlu.
Kufuphi uya kufumana iKangkamagus Highway eneembono eziphefumlayo zamagqabi e-Autumnal.
I-Ossipee Lake yimizuzu eli-10 ukuya emantla kwaye iLake Winnipesaukee, elona chibi likhulu eNew Hampshire, limalunga nemizuzu engama-20 ukuya ngasentshona. Kukho amakhulu amachibi amancinci angqonge kufutshane.
Ndiya kufumaneka ngalo lonke ixesha lokuhlala kwakho kwaye ndiya kuhlala ndinxibelelana xa ufuna naluphi na uncedo.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Ossipee